Afaka mahita orinasa SEO eo akaikiko aho, ary mankafy ny vokatra tsara indrindra?
Ny fanatanterahana ny fanapahan-kevitra tsara dia tena zava-dehibe raha ny hividianana orinasa iray mahafeno fepetra ahafahana manome tolotra ara-dalàna ao amin'ny Search Engine Optimization. Ary mety ho asa goavana izany - zavatra tokony ho roa taona lasa izay dia tsy maintsy niatrika ilay olana iray ihany aho. Rehefa nitodika tany aoriana aho, rehefa nanomboka nijery ny mpikaroka tsara indrindra mba hananganana ny tranonkalako, dia nanao fangatahana fikarohana toy ity "orinasa SEO eo akaikiko". "Raha ny marina, dia efa nieritreritra loatra aho sady mbola tsy nahalala mihitsy tamin'izany fotoana izany - carrera de fotografia en ecuador. Ny zavatra dia hoe nino aho fa afaka mahita orinasa SEO eo akaikiko aho, mba handehanana sy hahita ireo tovolahy ireo nandritra ny fivoriana voalohany, ary tsy nandao ny tanànako.
Alohan'ny zavatra hafa, avelao horaisintsika ho azo antoka - ny fikarohana ny orinasan'ny SEO eo akaikiko dia fahadisoana mahatsiravina. Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny alemaina. Ary mbola tsy nandre zavatra hafa momba ilay anjaran'ny liona tamin'izy ireo aho. Voalohany, tsy midika izany fa tsy nanome tolotra tsara fanahy ireo orinasa ireo. Saingy teo amin'ny indostria nandritra ny roa taona dia takatro fa zava-dehibe ny tokony handoavana fotoana amin'ny fikarohana ara-fifaninanana. Midika eto aho fa raha misy orinasa SEO iray mendrika sy mendrika eo akaikiko, dia mety ho fantatro izany amin'ny lisitra maro, ny fijoroana vavolombelona ary ny fanehoan-kevitra hafa ao amin'ny tranonkala.
Hita ho asa mahagaga ny fanivanana ireo spam rehetra ireo, saingy tsotra ilay olana. Ny indostrian'ny sehatry ny Search Engine Optimization dia tsy mahatonga azy ireo ho tsotra kokoa hahitana mpivarotra azo antoka na farafaharatsiny mpanolo-tsaina mavesatra ao anaty ranomasina amin'ny fahamendrehana sandoka. Ny olana dia ny lisitra fikarohana ambony toy ny "SEO tsara indrindra" dia tsy afaka manao na inona na inona afa-tsy manome toky fa ireo orinasa ireo dia nahazo vola mba hiloka amin'ny. Ary mbola tsy nisy fotoana azoko natao mba hahalalako ny lazan'ny orinasa mifandraika amin'ny orinasa, tsy hiteny hoe nanao ny lalan-diso aho rehefa niezaka ny hitady orinasa SEO teo akaikiko. Ny olana eo amin'ny hazo fihinanan-koditra dia nitovy ihany - tamin'ny alalan'ireo lisitra dokam-barotra momba ny karama, dia tsy azo atao mihitsy ny manangana fifandraisana mahatoky sy maharitra.
Raha jerena ny lanjan'ny lionan'ny mpamatsy lehibe dia mety ho voafetra ihany ny fidirana amin'ny daholobe amin'ny marika na ny fiarahamonina misy azy, manoro hevitra aho amin'ny fampiasana ireo ratsaketsaka ireo ny fahadisoako teo aloha sy niaina. Eny, halako ny miresaka zavatra miharihary, saingy indraindray isika dia afaka mahita vokatra tsy ampoizina mihitsy aza. Noho izany, ny drafitra tsara indrindra azonao atao mba hahitanao ny zon'ny SEO marina dia afaka miantehitra amin'ny sasany amin'ireto manaraka ireto:
Tsy raharahanao ny lisitra avo lenta sy ny valin-teny maimaim-poana nomena anao na ny fijoroana vavolombelona ankasitrahanao;
Jereo bebe kokoa amin'ny qualitative, fa tsy latsa-be marimaritra iraisana - aza adino ny mombamomba ny dokambarotra indray mandeha ary ho an'ny rehetra;
Aza misalasala manadihady ny fandaharam-pianarana, ary koa ny fijoroana vavolombelona azo itokisana izay voakasika amin'ny porofo sasany sy ny angon-drakitra mifandraika amin'ny mpanjifa teo aloha izay nahafaly ny serivisy.
Jereo tsara ny tranokalan'ny SEO mpanome tolotra, jereo ny lozam-pifanerany, mianatra ny rindran-kira, ary koa ny fomba fiasa iombonana.
Farany, mety miantso azy ireo ianao ary mangataka ny fitsipi-pitondran-tenany. Ny tiako holazaina dia ny fametrahana ny orinasan-tseraseran'ny SEO amin'ny sehatra maitso amin'ny fividianana fikarohana izay azo ampiasaina, fa tsy voamarika tanteraka, na matetika tsy mangina. Tokony hanana fanontaniana ihany koa ianao eo amin'ny fitaovana ampiasainy, mba ho azo antoka fa tsy mety ary tsy manisy ratsy ny fandikana ny Google. Azonao atao koa ny misedra fitsapana manafintohina ary manontania azy ireo hoe hafiriana matetika no mitahiry ny angona mpanjifantenany, na karazana tatitra mialoha izay azonao atao ny mamolavola anao ho antokom-panantenana na mpanjifa manana tanjona.